University of Lubeck - Get Higher Education in Germany, Eoropa
Aza adino ny discuss University of Lubeck
In 1973, the University of Lubeck became an independent scientific institution in the state of Schleswig-Holstein. Manolotra mari-pahaizana izahay fandaharana ny fitsaboana, informatika, injeniera, sy ny siansa momba ny zavaboary. Interdisciplinary fandaharan'asa mahafaoka siansa momba ny zavaboary, informatika, ary ny hanatitra ny fitsaboana azo ampiharina sy niakatra-to-daty fanabeazana underpinned ny ambony indrindra fari-fitsaboana. Ny toe-piainana eto noho ny mivoatra sy mampihatra ny teknolojia vaovao, diagnostics, sy ny fitsaboana dia mety tsara, vokatry ny Aza Tia Tena eo fahaizanareo, and collaboration with other institutions in Lübeck, ny Research Center Borstel, ny Medical Laser Centre, ary raharaham-barotra eo an-toerana. Teaming-maso amin'ny firenena sy iraisam-pirenena Institiota fikarohana bolsters ny kalitaon'ny fikarohana any am-oniversite, amin'izao fotoana izao voafaritra roa saha ny fikarohana manokana.
Raha ampitahaina amin'ny anjerimanontolo hafa, ny Oniversiten'i Lubeck dia kely, fotsiny 3,400 mpianatra - Mirehareha tsara fa mpampianatra-mpianatra tahan'ny. Ny avo filaharana ny solosaina siansa sy ny fanafody mpianatra manamafy ny fenitra avo ny fampianarana sy ny fanabeazana.
Azo antoka ny fizakantena avy amin'ny fanjakana. Mila tena fitantanana, miavaka manao fikarohana momba sehatra iraisam-pirenena, fanomezana mitaky ny fampianarana, hanampy amin'ny tanora manam-pahaizana, ary miantoka mahafeno fepetra araka ny tokony ho mpiasa. Hahatratra ireo tanjona isika amin'ny alalan'ny interdisciplinary fandaharan'asa momba ny toetsaina ny fitsaboana, siansa natoraly, ary ny solosaina siansa / injeniera.
Tsy manome fanompoana manontolo fikarakarana ny marary ao amin'ny toeram-pitsaboana.
ary ny mpikambana sy ny andrim-panjakana mifandray amin'izany:
Fitondran-tena vaovao sy fahalalana-entin'ny fototra fikarohana amin'ny isan-karazany ny fampiharana;
hanolotra multifaceted, Advanced, fikarohana mifototra amin'ny fanabeazana miorina amin'ny vinavinan-kevitra, amin'ny fomba tsara sy voarafitra didactically fomba hanorina tetezana ho amin'ny tena izao tontolo izao, ary hijery ireo tsy tapaka;
Miezaha ho hentitra sy mitohy fanovana rehetra diplaoma fandaharana sy ny semesters, mba mamorona sy mitondra zava-baovao hampandrosoana ny fanabeazana;
Miara-miasa amin'ny fikarohana toeram-pampianarana sy amin'ny an-toerana sy iraisam-pirenena orinasa, indrindra fa ireo mipetraka any amin'ny faritra;
Moa nasionaly sy iraisam-pirenena mirona sy tia mifaninana;
Drafitra andraikitra momba ny hoavy amin'ny alalan'ny fanitarana ny oniversite, ny misaina sy ny toeram-pitsaboana, ary manatsara ny heviny;
Ataovy azo antoka ny fenitra ambony indrindra ny asa tsara ho an'ny rehetra;
Mijoroa ny fandeferana sy ny tompon'andraikitra fifandraisana eo amin'ny vondrona rehetra tany amin'ny oniversite sy ny fitsipiky ny fitoviana, indrindra fa eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy, ary miezaka mba hanatanteraka izany;
Handrisika ny mpikambana mba handray ny andraikitra;
Mamorona mpanohana-family rivo-piainana sy ny rafitra ho tsara kokoa ny fanabeazana sy ny asa mifanaraka amin'ny fiainam-pianakaviana;
Manaova amin'ny tompon'andraikitra, ara-toekarena, ary mahefa fomba mba hampiasa ireo loharano nomena azy ireo amim-pitandremana sy amin'ny tontolo iainana-namana fomba.
rehefa 1945 City Hospital East
3. Novambra 1964 Academy of Medicine of Lübeck (2nd Faculty of Medicine of the Christian Albrechts University of Kiel), clinical semester for the medicine degree programme
7. Mey 1973 Medical School of Lübeck
1979 Preclinical Faculty of Natural Sciences (amin'izao fotoana izao: Faculties of Computer Science/Engineering and Natural Sciences), for students in the pre-clinical semester of their medical degree programme
10. Mey 1985 Medical University of Lübeck
Ianao ve mila discuss University of Lubeck ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra